13.07.20 Morning Nepali Murli Om Shanti BapDada Madhuban
“ मीठे बच्चे– सबैलाई यो खुसीको खबर सुनाऊ – अब फेरि विश्वमा शान्तिको स्थापना भइरहेको छ , बाबा आउनु भएको छ एक आदि सनातन देवी-देवता धर्मको स्थापना गर्न।”
तिमी बच्चाहरूलाई पटक-पटक यादमा रहने इशारा किन दिइन्छ?
किनकि सदा निरोगी र सदा पावन बन्नको लागि हो नै याद। त्यसैले जब समय मिल्छ, यादमा रहने गर। सबेरै-सबेरै स्नान आदि गरेर एकान्तमा चक्कर लगाऊ वा बस। यहाँ त कमाई नै कमाई छ। यादबाट नै विश्वको मालिक बन्छौ।
प्यारा बच्चाहरूले जानेका छन्– यस समयमा सबैले विश्वमा शान्ति चाहन्छन्। यो आवाज सुनिरहन्छन्– विश्वमा शान्ति कसरी हुन्छ? तर विश्वमा शान्ति कहिले थियो जुन अहिले चाहन्छन्– यो कसैले जानेका छैनन्। तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ– विश्वमा जब यी लक्ष्मी-नारायणको राज्य थियो तब विश्वमा शान्ति थियो। अहिलेसम्म पनि लक्ष्मी-नारायणको मन्दिर बनाइरहन्छन्। तिमीले कसैलाई पनि यो बताउन सक्छौ– विश्वमा शान्ति ५ हजार बर्ष पहिला थियो, अब फेरि स्थापना भइरहेको छ। कसले स्थापना गर्छ? यो मनुष्यले जानेका छैनन्। तिमी बच्चाहरूलाई बाबाले सम्झाउनु भएको छ, तिमीले कसैलाई पनि सम्झाउन सक्छौ। तिमीले लेख्न सक्छौ। तर अहिलेसम्म कसैलाई लेख्ने कसैको हिम्मत छैन। अखबारमा आवाज त सुन्छन्, सबैले भन्छन् विश्वमा शान्ति होस्। लडार्इं आदि लाग्दा मनुष्यहरूले विश्वमा शान्तिको लागि यज्ञ रच्छन्। कुनचाहिँ यज्ञ? रुद्र यज्ञ रच्छन्। अहिले बच्चाहरूले जानेका छन्– यस समयमा बाबा जसलाई रुद्र शिव पनि भनिन्छ, उहाँले ज्ञान यज्ञ रच्नुभएको छ। विश्वमा शान्ति अब स्थापना भइरहेको छ। सत्ययुग नयाँ दुनियाँमा जहाँ शान्ति थियो, अवश्य पनि राज्य गर्ने पनि थिए। निराकारी दुनियाँको लागि त भनिंदैन– विश्वमा शान्ति होस्। त्यहाँ त हुन्छ नै शान्ति। विश्व मनुष्यहरूको हुन्छ। निराकारी दुनियाँलाई विश्व भनिंदैन। त्यो हो शान्तिधाम। बाबाले बारम्बार सम्झाइरहनु हुन्छ, फेरि पनि कसैले भुलिहाल्छन्, कसै-कसैको बुद्धिमा छ, उनीहरूले सम्झाउन सक्छन्। विश्वमा शान्ति कसरी थियो, अब फेरि कसरी स्थापना भइरहेको छ– यो जसलाई पनि सम्झाउन धेरै सहज छ। यहाँ जब आदि सनातन देवी-देवता धर्मको राज्य थियो तब एउटै धर्म थियो। विश्वमा शान्ति थियो, यो धेरै सहजै सम्झाउनु पर्ने र लेख्नु पर्ने कुरा हो। ठूला-ठूला मन्दिर बनाउनेहरूलाई पनि तिमीले लेख्न सक्छौ– आज भन्दा ५ हजार वर्ष पहिला विश्वमा शान्ति थियो, जब यिनको राज्य थियो, जसको नै हामी मन्दिर बनाउँछौं। यहाँ नै यिनको राज्य थियो, अरू कुनै धर्म थिएन। यो त सहज छ र बुझ्ने कुरा हो। ड्रामा अनुसार पछि गएर सबैले बुझ्ने छन्। तिमीले यो खुसीको खबर सबैलाई सुनाउन सक्छौ, सुन्दर कार्डमा छपाउन पनि सक्छौ। विश्वमा शान्ति आज भन्दा ५ हजार वर्ष पहिला थियो, जब नयाँ दुनियाँ, नयाँ भारतवर्ष थियो। लक्ष्मी-नारायणको राज्य थियो। अब फेरि विश्वमा शान्ति स्थापना भइरहेको छ। यो कुरा स्मरण गर्नाले पनि तिमी बच्चाहरूलाई धेरै खुसी हुनुपर्छ। तिमीलाई थाहा छ, बाबालाई याद गर्नाले नै हामी विश्वको मालिक बन्छौं। सारा कुरा तिमी बच्चाहरूको पुरुषार्थमा आधारित छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ– समय मिलेसम्म बाबाको यादमा बस। सबेरै स्नान गरेर फेरि एकान्तमा चक्कर लगाऊ या एक ठाउँमा बस। यहाँ त कमाई नै कमाई गर्नु छ। सदा निरोगी र सदा पावन बन्नको लागि नै यो याद हो। यहाँ त संन्यासीहरू पवित्र भए पनि बिरामी अवश्य हुन्छन्। यो हो नै रोगी दुनियाँ। त्यो हो निरोगी दुनियाँ। यो पनि तिमीलाई थाहा छ। दुनियाँमा कसैलाई के थाहा– स्वर्गमा सबै निरोगी हुन्छन् भनेर। स्वर्ग केलाई भनिन्छ, कसैलाई थाहा छैन। तिमीले अहिले जानेका छौ। बाबा भन्नुहुन्छ– जसलाई भेटे पनि तिमीले सम्झाउन सक्छौ। मानौं कसैले आफूलाई राजा-रानी कहलाउँछन्। अहिले राजा-रानी त कोही छँदै छैनन्। भन, तपाई अहिले राजा-रानी त हुनुहुन्न। यो बुद्धिबाट पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। महाराजा-महारानी श्री लक्ष्मी-श्री नारायणको राजधानी त अहिले स्थापना भइरहेको छ। त्यसैले अवश्य यहाँ कुनै राजा-रानी छैनन्। हामी राजा-रानी हौं, यो पनि भुल। साधारण मनुष्य जस्तै चल। यिनीहरूको पासमा पनि पैसा सुन आदि रहन्छ नि। अहिले नियमहरू पास हुँदै छन्, यो सबै लिन्छन्। फेरि साधारण मनुष्य जस्तै हुन्छन्। यो युक्ति पनि रचिरहेका छन्। गायन पनि छ नि, किसकी दबी रहे धूल मे, किसकी राजा खाए... अहिले राजाले कसैको खाँदैनन्। राजाहरू त छँदै छैनन्। प्रजाले नै प्रजाको खाइरहेका छन्। आजकलको राज्य धेरै अचम्मको छ। जब सबै राजाहरूको नाम समाप्त हुन्छ तब फेरि राजधानी स्थापना हुन्छ। अहिले तिमीलाई थाहा छ– हामी त्यहाँ गइरहेका छौं जहाँ विश्वमा शान्ति हुन्छ। हो नै सुखधाम, सतोप्रधान दुनियाँ। हामी त्यहाँ जानको लागि पुरुषार्थ गरिरहेका छौं। बच्चीहरूले बसेर राम्ररी सम्झाऊन्, केवल बाहिरको भव्यता हुनु हुँदैन। आजकल त नक्कली पनि धेरै निस्केका छन् नि। यहाँ त पक्का ब्रह्माकुमार कुमारीहरू हुनुपर्छ।
तिमी ब्राह्मणहरूले ब्रह्मा बाबाको साथमा विश्वमा शान्ति स्थापनाको कार्य गरिरहेका छौ। यसरी शान्ति स्थापना गर्ने बच्चाहरू धेरै शान्तचित्त र धेरै मीठो हुनुपर्छ किनकि जानेका छन्– हामी विश्वमा शान्ति स्थापना गर्ने निमित्त बनेका छौं। त्यसैले पहिला हामीमा धेरै शान्ति हुनुपर्छ। कुराकानी पनि धेरै विस्तारै-विस्तारै शिष्टतापूर्वक गर्नु पर्छ। तिमी बिल्कुलै गुप्त छौ। तिम्रो बुद्धिमा अविनाशी ज्ञान रत्नहरूको खजाना भरिएको छ। तिमी बाबाको वारिस हौ नि। जति बाबाको पासमा खजाना छ, तिमीमा पनि पूरा हुनुपर्छ। सारा सम्पत्ति तिम्रो हो तर हिम्मत छैन भने लिन सक्दैनौ। लिनेले नै उच्च पद पाउँछन्। कसैलाई सम्झाउने धेरै सोख हुनुपर्छ। हामीले विश्वलाई फेरि स्वर्ग बनाउनु छ। धन्दा आदि गर्दा साथमा यो पनि सेवा गर्नु छ त्यसैले बाबाले छिटो-छिटो गर्नुहुन्छ। फेरि पनि हुन त ड्रामा अनुसार नै हुन्छ। हरेक चिज आफ्नो समयमा चलिरहेको छ, बच्चाहरूलाई पनि पुरुषार्थ गराइरहनु भएको छ। बच्चाहरूलाई निश्चय छ– अब बाँकी थोरै समय छ। यो हाम्रो अन्तिम जन्म हो, फेरि हामी स्वर्गमा हुन्छौं। यो दु:खधाम हो, फेरि सुखधाम हुन्छ। बन्न समय त लाग्छ नि। यो विनाश सानो कहाँ छ र! जसरी नयाँ घर बन्दैछ भने नयाँ घरको नै याद आउँछ। त्यो हो हदको कुरा, त्यसमा कुनै सम्बन्ध आदि कहाँ बदलिन्छ र! यहाँ त पुरानो दुनियाँ नै बदलिनु छ फेरि जसले राम्रोसँग पढ्छ ऊ राजाई कुलमा आउँछ। नत्र प्रजामा जान्छ। बच्चाहरूलाई धेरै खुसी हुनुपर्छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ– ५०-६० जन्म तिमीले सुख पाउँछौ। द्वापरमा पनि तिम्रो पासमा धेरै धन हुन्छ। दु:ख त पछि गएर हुन्छ। जब राजाहरू आपसमा लड्छन्, फूट पर्छ तब दु:ख सुरु हुन्छ। पहिला त अनाज आदि पनि धेरै सस्तो हुन्छ। अनिकाल आदि पनि पछि गएर पर्छ। तिम्रो पासमा धेरै धन हुन्छ। सतोप्रधानबाट तमोप्रधानतामा बिस्तारै-बिस्तारै आउँछौ। त्यसैले तिमी बच्चाहरूलाई भित्र धेरै खुसी हुनुपर्छ। आफैंलाई खुसी छैन, शान्ति छैन भने उनले विश्वमा के शान्ति स्थापना गर्नेछन्! धेरैको बुद्धिमा अशान्ति हुन्छ। बाबा आउनु हुन्छ नै शान्तिको वरदान दिन। भन्नुहुन्छ– मलाई याद गर्यौ भने तमोप्रधानताको कारणले अशान्त भएको आत्मा यादले सतोप्रधान, शान्त बन्छ। तर बच्चाहरूबाट यादको मेहनत पुग्दै-पुग्दैन, यादमा न रहनाको कारणले नै फेरि मायाको तुफान आउँछ। यादमा रहेर पूरा पावन बनेनौ भने सजाय खानु पर्नेछ। पद पनि भ्रष्ट हुन्छ। यस्तो सम्झनु हुँदैन– स्वर्गमा त जाने नै छौं। अरे, मार खाएर पाई-पैसाको सुख पाउनु, यो के राम्रो हो र! मनुष्यहरूले उच्च पद पाउनको लागि कति पुरुषार्थ गर्छन्। यस्तो होइन– जे मिल्छ त्यही राम्रो। यस्तो कोही छैन, जसले पुरुषार्थ नगरोस्। भीख माग्ने भिखारीले पनि आफूसँग पैसा जम्मा गर्छन्। पैसाको त सबै भोका हुन्छन्। पैसाबाट हरेक कुराको सुख पाइन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ– हामीले बाबाबाट अथाह धन लिन्छौं। पुरुषार्थ कम भयो भने धन पनि कम मिल्छ। बाबाले धन दिनुहुन्छ नि। भन्नुहुन्छ पनि– धन छ भने अमेरिका आदिको चक्कर लगाऊ। तिमीले जति बाबालाई याद गर्छौ र सेवा गर्छौ त्यति सुख पाउँछौ। बाबाले हरेक कुरामा पुरुषार्थ गराउँदै उच्च बनाउनु हुन्छ। सम्झनुहुन्छ– बच्चाहरूले मेरो कुलको नाम प्रख्यात गर्नेछन्। तिमी बच्चाहरूले पनि ईश्वरीय कुलको, बाबाको नाम प्रख्यात गर्नु पर्छ। उहाँ सत् बाबा, सत् टिचर, सद्गुरु ठहरिनु भयो। उच्च भन्दा उच्च बाबा उच्च भन्दा उच्च सद्गुरु पनि ठहरिनु भयो। यो पनि सम्झाइको छ– गुरु एउटै हुन्छ, दोस्रो न कोही। सर्वका सद्गति दाता एक, यो पनि तिमीले जानेका छौ। अहिले तिमी पारसबुद्धि बनिरहेका छौ। पारसपुरीको पारसनाथ राजा-रानी बन्छौ। कति सहज कुरा छ। भारतवर्ष गोल्डन एजेड थियो, विश्वमा शान्ति कसरी थियो– यो तिमीले यस लक्ष्मी-नारायणको चित्रमा सम्झाउन सक्छौ। स्वर्गमा शान्ति थियो। अहिले हो नर्क। यसमा अशान्ति छ। स्वर्गमा यी लक्ष्मी-नारायण रहन्छन् नि। कृष्णलाई लर्ड कृष्णा पनि भन्छन्। कृष्ण भगवान पनि भन्छन्। अब लर्ड त धेरै छन्, जसको पासमा लेन्ड (जमीन) प्रशस्त हुन्छ उसलाई पनि भनिन्छ– लेन्डलर्ड। कृष्ण त विश्वका राजकुमार थिए, जुन विश्वमा शान्ति थियो। यो पनि कसैलाई थाहा छैन राधे-कृष्ण नै लक्ष्मी-नारायण बन्छन्।
तिम्रो लागि मनुष्यहरूले कति कुरा बनाउँछन्, हंगामा मच्चाउँछन्, भन्छन् यिनले त भाइ-बहिनी बनाउँछन्। सम्झाइन्छ प्रजापिताका ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, जसको लागि नै गायन गर्छन् ब्राह्मण देवी-देवताए नम:। अहिलेका ब्राह्मणले पनि उनीहरूलाई नमस्ते गर्छन् किनकि उनीहरू सच्चा भाइ-बहिनी हुन्। पवित्र रहन्छन्। त्यसैले पवित्रको किन इज्जत नगर्ने? कन्या पवित्र छिन् त्यसैले उनलाई पनि ढोग्छन्। बाहिरको भिजिटर आयो भने उसले पनि कन्यालाई नमन गर्छ। यस समयमा कन्याको यति मान किन भएको छ? किनकि तिमी ब्रह्माकुमार-ब्रह्माकुमारी हौ नि। धेरै संख्या तिमी कन्याहरूको छ। शिवशक्ति पाण्डव सेना गायन गरिएको छ, यसमा पुरुष पनि छन्, तर धेरै संख्या माताहरूको छ त्यसैले गायन गरिएको हो। जसले राम्रोसँग पढ्छ ऊ उच्च बन्छ। अहिले तिमीले सारा विश्वको इतिहास-भूगोल जानिसकेका छौ। चक्रमा पनि सम्झाउन धेरै सहज छ। भारतवर्ष पारसपुरी थियो, अहिले छ पत्थरपुरी। त्यसैले सबै पत्थरनाथ ठहरिए नि। तिमी बच्चाहरूले यस ८४ को चक्रलाई पनि जानेका छौ। अब घर जानु छ त्यसैले बाबालाई पनि याद गर्नु छ, जसबाट पाप काटिन्छ। तर बच्चाहरूबाट यादको मेहनत पुग्दै-पुग्दैन किनकि अलबेलापन छ। सबेरै उठ्दैनन्। यदि उठे भने पनि मजा आउँदैन। निद्रा आउन थाल्छ फेरि सुतिहाल्छन्। निराश हुन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ– प्यारा बच्चाहरू! यो युद्धको मैदान हो नि। यसमा निराश हुनु हुँदैन। यादको बलबाट नै मायामाथि विजय पाउनु छ। यसमा मेहनत गर्नु छ। धेरै राम्रा-राम्रा बच्चाहरू जसले यथार्थ रीति याद गर्दैनन्, चार्ट राख्नाले नाफा-नोक्सान थाहा हुन्छ। भन्छन्– चार्टले त मेरो अवस्थामा कमाल गरेको छ। यसरी बिरलै कसैले चार्ट राख्छ। यसमा पनि धेरै मेहनत छ। धेरै सेन्टरमा झुटो बोल्ने पनि गएर बस्छन्, विकर्म गरिरहन्छन्। बाबाको डाइरेक्सनमा नचल्नाले धेरै नोक्सान गर्छन्। बच्चाहरूलाई कहाँ थाहा हुन्छ र– निराकारले भन्नु भएको हो वा साकारले? बच्चाहरूलाई बारम्बार सम्झाइन्छ– सदैव सम्झ, शिवबाबाले नै डाइरेक्सन दिनुहुन्छ। अनि तिम्रो बुद्धि त्यहाँ लागिरहन्छ।
आजकल विवाह गर्नु पहिला फोटो देखाउँछन्, अखबारमा पनि छाप्छन्– यिनको लागि यस्ती-यस्ती राम्रो घरकी कन्या चाहिएको छ। दुनियाँको के हाल भएको छ, अझै के हुनु छ! तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ– अनेक प्रकारका मतहरू छन्। तिमी ब्राह्मणहरूको छ एक मत। विश्वमा शान्ति स्थापना गर्ने मत। तिमीले श्रीमतबाट विश्वमा शान्ति स्थापना गर्छौ। त्यसैले बच्चाहरू पनि शान्तिमा रहनु पर्छ। जसले गर्छ, उसले पाउँछ। नत्र धेरै घाटा पर्छ। जन्म-जन्मान्तरको घाटा हुन्छ। बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ– आफ्नो घाटा-फाइदा हेर। चार्ट हेर– मैले कसैलाई दु:ख त दिइनँ? बाबा भन्नुहुन्छ– तिम्रो यो समय एक-एक सेकेण्ड अत्यन्तै बहुमूल्य छ। सजाय खाएर सानो पद पाउनु के ठूलो कुरा भयो र! तिमी त धेरै धनवान हुन चाहन्छौ नि। पहिला पहिला जो पूज्य हुन्छन् उनीहरूलाई नै पुजारी बन्नु छ। यति धन हुन्छ, सोमनाथको मन्दिर बनाउँछन् अनि पूजा गर्छन्। यो पनि हिसाब छ। बच्चाहरूलाई फेरि पनि सम्झाउनु हुन्छ चार्ट राख्यौ भने धेरै फाइदा हुन्छ। नोट गर्नुपर्छ। सबैलाई सन्देश दिँदै जाऊ, चुप लागेर नबस। ट्रेनमा पनि तिमी सम्झाएर लिटरेचर देऊ। भन, यो करोडौंको सम्पत्ति हो। जब लक्ष्मी-नारायणको यहाँ राज्य थियो तब विश्वमा शान्ति थियो। अब बाबा फेरि त्यही राजधानी स्थापना गर्न आउनु भएको छ, तिमीले बाबालाई याद गर्यौ भने विकर्म विनाश हुन्छ, अनि विश्वमा शान्ति हुन्छ। अच्छा!
१) हामी विश्वमा शान्ति स्थापना गर्नको लागि निमित्त ब्राह्मण हौं, हामी धेरै-धेरै शान्तचित रहनु छ, कुराकानी धेरै विस्तारै वा रोयल्टी पूर्वक गर्नु छ।
२) अलबेलापन छोडेर यादको मेहनत गर्नु छ। कहिल्यै पनि निरास हुनु हुँदैन।
विकाररूपी सर्पलाई पनि शैया बनाउने विष्णु समान सदा विजयी , निश्चिन्त भव
जुन विष्णुको शेश शैया देखाउँछन् त्यो तिमी विजयी बच्चाहरूको सहजयोगी जीवनको यादगार हो। सहजयोगद्वारा विकाररूपी सर्प पनि अधीन हुन्छ। जो बच्चाले विकार रूपी सर्पमाथि विजय प्राप्त गरेर त्यसलाई आरामको शैया बनाउँछन् ऊ सदा विष्णु समान हर्षित र निश्चिन्त रहन्छ। त्यसैले सदा यो चित्र आफ्नो सामुन्ने राखेर हेर– विकारहरूलाई अधीन गर्ने अधिकारी हुँ। आत्मा सदा आरामको स्थितिमा निश्चिन्त छ।
बालक र मालिकपनको सन्तुलनबाट प्लानलाई प्राक्टिकलमा ल्याऊ।